कति जिल्ला छन्- नत पूजा शर्माले जानिन् न फिल्मीखबर ? « Media for all across the globe
कति जिल्ला छन्- नत पूजा शर्माले जानिन् न फिल्मीखबर ?
नायिका पूजा शर्मा सामाजिक संजालमा आजकाल खुब् भाइरल छिन्। कारण – नेपालमा कति प्रदेश र जिल्ला छन् – यति सामान्य ज्ञानसम्म उनलाई जानकारी रहेनछ। प्रदेश र जिल्ला थाहा नपाउँदा कुनै एक टेलिभिजन संवादमा पत्रकारले गरेको प्रश्नमा उनलाई जवाफ दिनै हम्मे-हम्मे पर्‍यो। यही कारण नायिका शर्मा ट्रोलको शिकार हुन पुगिन्।
नायिका पूजा शर्मा र सुष्मा कार्कीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन। दुई नायिकाबीच शित युद्ध जारी रहेकै बेला सुष्माका लागि भने पूजाको प्रदेश र जिल्ला ट्रोल नयाँ मसला बनेको छ। यसै बिषयमा सुष्माको फेसबुकमा टिप्पणी आयो – नेपालमा कति वटा जिल्ला र प्रदेश छन् भन्ने ज्ञान नहुने नेपालका हिरोईन देखेर लाज लाग्यो, छिः छि…। पूजाको ट्रोलमा घिउ थप्न आएकी सुष्मा पत्रकारहरुका लागि भने फेरि नयाँ मसलाको पात्र बनिन्।
पूजाप्रति सुष्माको कटाक्ष- नेपालका हिरोइन देखेर लाज लाग्योः यो हेडलाइनमा झ डटकमले समाचार प्रकाशित गर्‍यो। समाचारमा पूजा शर्मालाई पाठ पढाउन खोज्ने पत्रकार कै शिक्षामा अज्ञाता देखियो। पूजाले १४ जिल्ला भनिन् तर, फिल्मीखबरले ७५ जिल्ला लेख्यो – यहाँ पूजा शर्मा र फिल्मीखबरमार्फत समाचार तयार पार्ने पत्रकार उस्तै-उस्तै देखिए। ती पत्रकारलाई – नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा ७७ जिल्ला छन् भन्नेसम्म जानकारी रहेनछ। बाँकी त – नायिका पूजा शर्मा र फिल्मीखबरलाई राम…राम…राम…
चर्चित गायक भण्डारीको शब्द र गायक सापकोटाको स्वरमा “रोटी रत्यौली” बजारमा (भिडियो)
सुशान्त आत्महत्या प्रकरणमा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पक्राउ
पारु केसी मोफसलबाटै लोकदोहरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा जम्न सफल
सुशान्त आत्महत्या प्रकरण : रियाविरुद्ध ‘एफआइआर’ दर्ता
गायक कर्ट कोबेन- जो मृत्युपछि पनि सदाबहार चर्चामा छन्!